सिद्धार्थ बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ३० करोड, प्रति शेयर आम्दानी कति ? – Insurance Khabar
सिद्धार्थ बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ३० करोड, प्रति शेयर आम्दानी कति ?
प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७६, आईतवार १०:२९
सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २ अर्ब ३० करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । गत आथिक वर्षको सोही अवधिको तुुलनामा बैंकको नाफा २१ प्रतिशतले बढी हो ।
चौथो त्रैमाससम्मा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिजर्भ कोष १२ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा १ अर्ब ६५ करोड २० लाख १८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले १ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड ४८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब ४ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको निक्षेपमा २१ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो भने कर्जा प्रवाहमा २६ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
बैंकको मुख्य आम्दानीको स्रोत खुद ब्याज आम्दानी ३६ प्रतिशतले बढेको छ । अधिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रहेको खुद ब्याज आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बढेर ४ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेकोे छ । सिद्धार्थको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ६९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । अराब कर्जा ० दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।